သမ္မတကြီးနှင့် အင်တာဗျူး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » သမ္မတကြီးနှင့် အင်တာဗျူး
Posted by ဂျစ်စူ on Sep 15, 2011 in Aha! Jokes, Satire | 14 comments
ပြောင်စပ်စပ် Interview .
ကျနော်တော့ ဖတ်ပြီး တခွိခွိပဲ….
မဖတ်ရသေးတဲ့လူတွေလဲ ဖတ်ပြီး ခွိလို့ ရအောင်..ပြန်ရှဲလိုက်ပါတယ်..
သမ္မတကြီး…..။ ။ ဒီမယ် မောင်ရင် မင်းက အင်တာဗျူး လုပ်ချင်တယ် ဆိုလို့ ငါက လက်ခံလိုက်တာ ဘယ့်နှယ့်ကွာ ငါကိုတွေ့တာနဲ့ တဟီးဟီး တဟားဟားနဲ့ လင်းစမ်းပါအုံးကွ…။
အင်တာဗျူယာ ။ ။ သမ္မတကြီးတို့ အဖွဲ့က ပြည်သူတွေကို ပျော်ရွှင်မှုတွေ ပေးချင်လို့ ဟာသတွေ လုပ်ပြနေတယ်ထင်ပြီး ကျနော်က အားပေးတဲ့ အနေနဲ့ အလိုက်တသိနဲ့ရီပြတာ ပါခင်ဗျာ..။ ကဲ သမ္မတကြီးရေ………အမေးအဖြေလေးတွေ စလိုက်ကြရအောင်…….။
မေး ။ ။ သမ္မတကြီးက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အစစ်လို့ ခံယူထားပါသလား ခင်ဗျာ ။
ဖြေ ။ ။ ခက်ပါ့ မောင်ရင်ရယ်… သံဃာတော် သတ်ပြထားတာ ဒီမေးခွန်း ရှင်းနေတာဘဲ ။
မေး ။ ။ စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ လဘ်စားတဲ့ နေရာမှာ ထိပ်တန်းဖြစ်နေပါလျှက် သမ္မတကြီးက လဘ်မစားဘူးလို့ နံမည်ကြီးနေရတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်းက ဘာလည်း ဆိုတာ သိပါရစေ ခင်ဗျာ ။
ဖြေ ။ ။ ငါ့ရဲ့ တာဝန်တော်တော်များများကို ငါ့မိန်းမက ထမ်းဆောင်ပေးနေလို့ ဖြစ်မှာပါ ။
မေး ။ ။ မြန်မာနိူင်ငံရဲ့ သမိုင်းမှာ တခါမှ မကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေ လုပ်ပြမယ်လို့ သမ္မတကြီး ကြွေးကြော်ခဲ့တယ်နော်..။
ဘာတွေ လုပ်ပြမယ်လို့ စဉ်းစားထားလည်း ။
ဖြေ ။ ။ တတိုင်းပြည်လုံး သိသာအောင် ယောက်ျားကြီး တွေ ဖြစ်ပေမယ့် ချိတ်ထမီဝတ်ပြခဲ့တာ မြန်မာသမိုင်းမှာ ရှိခဲ့လို့လား.။ မြင်တတ်အောင် ကြည့်ကြစမ်းပါ…ဗျာ ။ အခု မြန်မာပြည်ရဲ့ အကြီးမားဆုံး ဧရာဝတီမြစ်ကြီးကို မြောင်းဖြစ်အောင် လုပ်ပြအုံးမယ် ။
မေး ။ ။ သမ္မတကြီးက တက်တက်ချင်းဘဲ အကြံပေးတွေ ခန့်လိုက်တာတွေ့ရပါတယ် ။ မရှင်းတာ တခု မေးချင်လို့ပါ ။ သူတို့က အကြံပေးတာလား ၊ သမ္မတကြီးတို့က အကျန်ပေးတာလား ။
ဖြေ ။ ။ သူတို့ကို ငါတို့က အကျန်ပေးတဲ့ အတွက် သူတို့က ငါတို့ကို အကြံပြန်ပေးတယ်လို့ ပြောလို့ရသလို ငါတို့ကို အကြံပေးတဲ့ အတွက် ငါတို့က အကျန်ပြန်ပေးတယ်လို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်…။
မေး ။ ။ သမ္မတကြီးက ပြည်သူတွေ ဆင်းရဲမွဲတေမှုကို တိုက်ဖျက်ဖို့ အတွက် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲက ဘယ်လို စိတ်ကူးကောင်းတွေကို ရရှိခဲ့လည်း ခင်ဗျာ ။
ဖြေ ။ ။ လောလောဆယ်တော့ တောင်းစားတဲ့ လူတွေကို အကုန်ဖမ်းပြီး ထောင်ချဖို့ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေပါတယ် ။
မေး။ ။ ဧရာဝတီက မြန်မာနိူင်ငံရဲ့ အသက်သွေးကြော ဖြစ်လို့ ဒီဆည်ကြီးသာ ဆောက်ဖြစ်လိုက်ရင် တိုင်းပြည်ကြီးပါ ဒုက္ခရောက်သွားနိူင်တဲ့ အနေအထားကို ဘယ်လို ကျော်လွှားဖို့ စဉ်းစားထားလည်း ခင်ဗျာ ။
ဖြေ ။ ။ ပိုင်ဆိုင်မှု တော်တော်များမျာကို နိူင်ငံခြားဘဏ်တွေမှာ ပြောင်းအပ်ထားပြီးသွားပါပြီ ။
မေး ။ ။ နိူင်ငံခြား က စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့် တိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်နေပါတယ်လို့ ပြောနေတဲ့သမ္မတကြီးနဲ့ အပေါင်းအပါများက ဘာကြောင့်ပိုင်ဆိုင်မှု မှန်သမျှကို တိုင်းတပါးမှ သွားပြီး ရင်းနှီးမြုပ်နှံတာလည်း သိပါရစေ ခင်ဗျာ ။
ဖြေ ။ ။ စီးပွားရေး ဆိုတာက သေချာတဲ့နေရာတွေမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှ အကျိုးအမြတ်ရတယ် ဆိုတာ လူတော်တော်များ နားလည် သဘောပေါက်ပြီးသား ဖြစ်လို့ ထပ်မရှင်းပြတော့ပါဘူး ။
မေး ။ ။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ ပြည်သူတွေ ပိုမိုများပြားလာတာ ဘာကြောင့်ပါလည်း ခင်ဗျာ…။
ဖြေ ။ ။ ငါတို့ကတော့ အားလုံးသိတဲ့ အတိုင်း ရောင်းလို့ရတာ မှန်သမျှ အကုန်ရောင်းချပေးနေတာ အားလုံး အမြင်ဘဲလေ ။
မေး။ ။ ယခင် အစိုးရ လက်ထက်မှာ တိုးတက်လာတာက ကုန်ဈေးနှုန်း ၊ ကျဆင်းလာတာက ၀င်ငွေ ၊နည်းပညာက လိပ်လို တွားသွား ပိုင်ဆိုင်မှု မှန်သမျှကို အကုန်ရောင်းစားခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံ ထဲက ဘယ်လို များ ထုတ်နှုတ် အသုံးချဖို့ စီစဉ်ထားပါသလည်း ခင်ဗျာ ။
ဖြေ ။ ။ ယခင် အတွေ့အကြုံများက အတော်လေးကို ကောင်းလို့ နေရာတော်တော်များများ မှာ မှီငြမ်းကိုးကားပြီး ယခုလည်း ဆက်လက် ကျင့်သုံးသွားမှာပါ ။
မေး ။ ။ ပြန်ကြားရေး ၀န်းကြီး ဦးကျော်ဆန်းက မီဒီယာတွေနဲ့ အတွေ့မှာ သူငိုပြလိုက်တယ်နော် ၊ အဲဒါ သမ္မတကြီး ဘယ်လို မြင်ပါသလည်း ခင်ဗျာ ။
ဖြေ ။ ။ သူ့ကို မေးကြည့်ပါတယ် ။ ကိုရီးယားတွေ အကြည့်များပြီး အဲဒီထဲက သရုပ်ဆောင်တွေကို သဘောကျနေလို့တခါတခါ အဲဒီလိုဘဲ လွတ်သွားတာပါလို့ ပြောတယ်..။ သူ့ ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် ဖြစ်ချင်ပြီး အံ့ကျော်ကြီး ကို သိပ်အားကျတာလို့ သူက ပြောပါတယ် ။
မေး ။ ။ အခု လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးက ပြည်တွင်းမှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားတွေ သုံးစွဲသူ မရှိအောင် ပိုလျှံနေလို့ တိုင်းတပါးကို ရောင်းစားရပါတယ်လို့ မီဒီယာတွေကို ပြေားကြားပြီး ကိန်းဂဏန်းကို ရွတ်ပြသွားတာ တွေ့ရပါတယ် ။ အဲဒါ သမ္မတကြီး ဘယ်လို မြင်ပါသလည်း ။
ဖြေ ။ ။ အဲဒီလူက ချဲရူးဗျ ၊ သူတွက်လိုက်ရင်တော့ အပိုင်ဘဲ ပြီးရင်တော့ တလွဲတွေ ကြီးပါဘဲ ။ နောက်တခုက သူက ပါဝါ ယူနစ်တောင် မှန်အောင် မတွက်တတ်လို့ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး ခန့်ထားတာလေ ။ အလွန်ဆုံးလွဲရင် ပြောင်းပြန်ပါဘဲ လို့ သူပြောတဲ့ စကားလေးတော့ရှိတယ်ဗျ ။
မေး ။ ။ ဒါပေမယ့် ဒီဝန်ကြီးပြောလိုက်တဲ့ စကားလုံးတွေကြောင့် အစိုးရသစ်ကြီး တဖွဲ့လုံးရဲ့ အဆင့်အတန်းက မြောင်းထဲကို ရောက်သွားသလိုဘဲနော် ။
ဖြေ ။ ။ ငါတို့ အစိုးရ အဖွဲ့သစ်ကြီးက အဆင့်အတန်းရှိတယ်လို တခါမှ မပြောဘူးပါဘူးနော် ။
မေး ။ ။ ပြည်သူလူထု တရပ်လုံးက ဧရာဝတီဟာ မြန်မာတနိူင်ငံလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်လို့ ဒီစီမံကိန်းကို အမြန်ဆုံးရပ်တန့်ချင်နေကြပါတယ် ။ သမ္မတကြီးသဘောထားကကော ဘယ်လို ခံယူထားပါသလည်း ခင်ဗျာ ။
ဖြေ ။ ။ ငါတို့ကလည်း ဧရာဝတီဟာ ငါတို့ အကျိုးစီးပွား အဖြစ်ခံယူထားပါတယ် ။
မေး ။ ။ လွှတ်တော် အမတ်တွေ က ယခင်က အတွေ့အကြုံလုံးဝ မရှိလို့ အခက်အခဲ ရှိပေမယ့် အခုပြောင်းလဲလာပုံလေးကို
နည်းနည်းပြောပြပေးပါအုံး သမ္မတကြီး ။
ဖြေ ။ ။ ယခင်ကတော့ အထဲရောက်ရင် တောင့်တောင့်ကြီး ထိုင်းပြီး ပြောသမျှ လက်ညိုးထောင် ခေါင်းငြိမ့်တတ်ကြပေမယ့်
အခုတော့ လွှတ်တော်ထဲမှာ အိပ်ငိုက်ရင်းကနေ လက်ညိုးထောင် ခေါင်းငြိမ့်နေတတ်ပါပြီ ။ တခါတလေ အိပ်ရင်တောင် ထောက်ခံပါတယ်ဆိုပြီး လက်ညိုးထောင်လိုက် ခေါင်းငြိမ့်လိုက်နဲ့ ယောင်တတ်နေကြတဲ့ အဆင့်ထိ တိုးတက်လာကြပါတယ် ။
မေး။ ။ လွှတ်တော် အမတ်ကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးဆုံး လိုအပ်ချက်လေးများကို ပြောကြားပေးပါခင်ဗျာ ။
ဖြေ။ ။ ( ၁ ) နေရာယူ ( ၂ ) လက်ညိုးထောင် ( ၃ ) ခေါင်းငြိမ့် ( ၄ ) လက်ခုပ်တီး ( ၅ ) အစည်းအဝေးပြီးဆုံးကြောင်း ကြေငြာ ရင် သဘောတူကြောင်း သုံးကြိမ် ရွတ်ပြီးတာနဲ့ အခန်းအတွင်းက လျှင်မြန်စွာ ထွက်ခွာတတ်ခြင်းပါဘဲ ခင်ဗျာ ။
မေး။ ။ ယခင် အစိုးရ ကနေ အခု အစိုးရ သစ်သို့ အသွင်ကူးပြောင်းသွားတဲ့ အခါ သမ္မတကြီး စိတ်ထဲ ဘ၀င်မကျမိတဲ့ အဓိက အချက်လေးကိုရှင်းပြပေးပါ ။
ဖြေ။ ။ ယခင်တုန်းကတော့ လူနည်းစုစားပါ……အခုတော့ လွှတ်တော် အမတ်တွေပါ ပါလာတဲ့ အတွက် ဝေစားမျှစားဆိုတော့ ရပိုင်ခွင့်လေးတွေ လျှော့သွားတာပေါ့ ခင်ဗျာ ။
မေး ။ ။ လက်ရှိ အနေအထားမှ ပြည်သူလူထုက တော့ လက်ရှိ အစိုးရသစ်ကြီးကို အယုံအကြည်ကင်းမဲ့သွားပါပြီ ။ အဲဒီအတွက် ဘယ်လို ပြန်လည် တည်ဆောက်မယ်လို့ စိတ်ကူးထားပါသလည်း ခင်ဗျာ ။
ဖြေ ။ ။ ချွတ်ထမီ အစား စကဒ်ဝတ်ပြီး လွှတ်တော်တက်ဖို့ အတွက် အားသွန်ခွန်စိုက် ပြင်ဆင်နေပါတယ် ။
လောလောဆယ် လွှတ်တော်ထဲမှာ အဲဒီကိစ္စကို အကြိတ်အနယ် ဆွေးနွေးနေကြပါတယ် ။ အရာင်လေးတွေ ၊ ရှေ့ခွဲမလား နောက်ခွဲလား နှစ်ဘက်လုံးခွဲမလား ဆိုတာ အခု ဒီဇိုင်နာတွေနဲ့ တိုင်ပင်ထားပါပြီ ။
မေး ။ ။ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည် အနာဂတ်ကို သမ္မတကြီး နဲ့ လက်ရှိ အစိုးရသစ်က ဘယ်လိုပုံစံမျိုး ထိ ပြောင်းလဲမယ်လို့ စိတ်ကူးထားတာများ ရှိပါသလည်း ခင်ဗျာ ။
ဖြေ ။ ။ ယခင်က ရွှေ့နိူင်ငံလို့ ခေါ်တဲ့ ငါတို့ တိုင်းပြည်ကြီးကို ရွှံ့ နိူင်ငံ ဆိုရင်တောင် တခုခု သုံးလို့ ရနိူင်သေးလို့ ဗွက်နိူင်ငံ အဆင့် ရောက်အောင် အစိုးရ အသစ်ကြီးက ၀ိုင်ဝန်း ကြိုးစားနေကြပါတယ် ဆိုတာ ပြည်သူလူထု အားလုံးကို သိအောင် ဆောင်ရွှက်ပေးပါ ။
ဒီစာစုလေးကို ဖတ်ပြီးသွားလို့ မိတ်ဆွေတို့ ခံစားရတာကို ပြောကြားချင်တယ် ဆိုရင် ဒီနေရာလေးမှာ လာရောက်ပြောကြားပေးဖို့လေးစားစွာ အသိပေး ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ခင်ဗျာ ။
ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်း ဒီအစိုးရအပေါ်စိတ် ပျက်ချင်လာပါတယ်
ကျွန်တော်စိတ်အပျက်ဆုံးကတော့ ပုလင်းကိုင် လက်ညိုးထောင်ပြီ
ကော့လန်ကောလန် လုပ်နေတဲ့ အမူးသမားအရုပ်လေးက ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်း
ခေါင်းနောက်အောင် မူးလာစေလို့ သူကိုညိမ်နေအောင်လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်
သူ့ကြည့်ပြီး မသောက်ပဲမူးလာလို့ပါ… ;P
ကျနော်..ငြိမ်ငြိမ်လေးနေနိုင်အောင် ကျိုးစားပါ့မယ်..ခင်ဗျ :D
မျက်စိနောက်အောင် လုပ်မိတဲ့အတွက်လဲ ရွာသူ၊ရွာသား အပေါင်းတို့ ကို အရက်သမားလေး ပေါက်ဖော်မှ တစ်ခါတည်း တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ခင်ည
အဲဒီ ဒီဇိုင်နာဆိုတာ ဟိုတစ်ယောက်လား လေးလေးပေါက် ;)
ကောင်းလိုက်တဲ့ ပို့စ်..facebook ကနေမဖတ်ရသေးတဲ့သူငယ်ချင်းတွေကို ပြန် share လိုက်ဦးမယ်…:)
နိုင်ငံတော် အုပ်ချုပ်နေတဲ.သူတွေက အဲ.လောက်တောင် ကောင်းကောင်းမွန်မွန်
ဒီလိုလူမျိုးတွေသာအုပ်ချုပ်နေ တိုင်းပြည်ဘက်လောက်ပဲခံတော့မလဲ မသိဘူး ငါတို့လဲ မြန်မြန်ပြေးမှ နောက်ကျတဲ့ခြေထောက် သစ္စာဖောက်ပဲဟေ့နော် သမ္မတကြီးက ရောင်းလို့ရတာမှန်သမျှ အကုန်ရောင်းမှာတဲ့နော် ရောင်းစရာတွေတော့ရှိတယ် ဒန်ဖလားစုတ်၊ခွက်စုတ်၊ဒန်အိုးပေါက်၊ကြေးအိုးပေါက် သမ္မတကြီးကို ရောင်းခိုင်းမှပဲ သူကအရောင်းအ၀ယ်တော်တယ်ဆိုတော့
ဟားဟား ဆရာပေါက်ဖော်တွေ့မှတွေ့တတ်တယ်။ဒီစာဖတ်ရတာ အတော်ကြာသွားတယ်။
အိတ်ဖွင့်ပေးစာလို့တောင် ပြောရမယ်။ အရင်က စာတွေဆို ကိုယ့်ဖာသာ ဖတ်ကြည့်လိုက်တာပဲရှိတယ်။ ခုစာကတော့ ကိုယ်တင်မကဘူး သိစေချင်လို့ ဘေးနားက လူတွေကို အော်ဖတ်ပြ ဖြစ်တဲ့အထိပါပဲ။
ကိုပေါက်ဖော်ရေ ရေးတတ်ဗျူးတတ်လိုက်တာ။လူ့ အာဏာရူးတွေအကြောင်းထင်းနေတာဘဲ။ခေတ်စနစ်က ကို ပျက်နေတော့ ပျက်စရာပျက်လုံးဖြစ်တာမဆန်းပါဘူး။
ဖြေတဲ့လူက အမှန်အတိုင်းဖြေမယ်ဆို ဒီလိုပဲဖြစ်လာမလားမသိ
ကိုပေါက်ဖော်လည်း ရှာရှာဖွေဖွေ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်
သဂျီးနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းလေးလည်း လုပ်ပါအုံး ကိုပေါက်ဖေါ်။ အဲဒီကျရင် သူဘယ်လောက်အော်အော် ဆော်သာဆော်…..
ဟိုတစ်ခါ Gazette Leaks မှာထဲက သဂျီးက ဒူးတုန်နေလေပြီ..
ပေါက်ဖော်တောင် မရေးရဲ့လို့ ခါးလေး ကော့လန် ကော့လန်နဲ့ ခါးတုန်နေတယ်မလား